बाबुले छोरीलाई लेखेको एउटा मुटु हल्लाउँने अन्तिम पत्र .. जसले सबैलाई रूहायो | imagenepalnews.com
June 11, 2018 adminLeaveaComment on बाबुले छोरीलाई लेखेको एउटा मुटु हल्लाउँने अन्तिम पत्र .. जसले सबैलाई रूहायो
बाबाः त्यो आउन धेरै समय बाँकी छ छोरी । त्यो छोरी १४ वर्षको उमेरमा हिड्दै गर्दा एक दिन अचानक बिरामी हुन्छे । बेहोस भएर ढलेकी छोरीलाई उसका बाबुले अस्पताल लिएर जान्छ । विभिन्न चेक जाँच पछि अस्पतालका डाक्टरहरुले बाबुलाई छोरीका रोगका बारेमा बताई दिन्छ । डाक्टरले भन्छन्, ‘तपाईंको छोरीको मुटु खराब छ र जुन्सुकै बेला पनि उस्को मृत्यु हुन सक्छ ।’
मेरी प्रिय छोरी… यदि तिमी यो पत्र पढ्दै छौ भने बुझ्नु सबै राम्रो भएको छ । जुन मैले तिमीलाई भनेको थिएँ । तिमीलाई याद छ बेटा…एकदिन तिमी मलाई सोधेकी थियौ की “बाबा मेरो १५ औं जन्मदिनमा हजुर मलाई के उपहार दिनुहुन्छ’ भनेर । मलाई त्यो बेला थाहा थिएन तर अहिले को उपहार तिमीलाई मेरो ‘मुटु’ हो । तिमीलाई जन्म दिँदा तिम्रो मामुले हामीलाई छाडेर गएकी थीइन । त्यो त मैले सहेको थिएँ तर तिमी त मेरो मुटु थियौ, मेरो प्राण ! त्यसैले कुनै पनि हालतमा तिमीलाई गुमाउन चाहन्नथेँ । यो पत्र पढेर कहिल्यै दुःखी नहुनु । मेरो मुटुको सधैं राम्रो ख्याल राख्नु है छोरी…..!!!!
मन छुने पत्र कस्तो लाग्यो कृपया शेयर गर्न नभुल्नुहोला |माथिको तस्बिर सान्केतिक मात्र हो ।
कुवेतमा ३१ जना नेपालीको गयो ज्यान
भूमिका गिरीले सबैलाई नचाइन नाच्ने मान्छे लाइ ठाउनै पुगेन सरर आउ माया मिनी बस चढेर आउ माया हेर्नुस पुरा भिडियो